Trondro | Tsidiho i Hultsfred
Mazava ho azy fa moka!
Andro manjono tsy misy rivotra eny ambonin'ny rano, mafana ny taratry ny masoandro… azo antoka fa ilay trondro mahafinaritra? Ny famatsian-drano fanjonoana dia tsy misy farany ary ny fiovana dia lehibe ao amin'ny tanànantsika. Ireto ny perch, pikeperch, pike, carp ary tench mba hitonona vitsivitsy. Tadiavo ny toerana fanjonoana ankafizinao ary tsapao ny fielezan'ny fitoniana ao amin'ny vatanao eo am-piandrasana mpampitony!
Farihy ala miaraka amin'ny jono ririnina tsara. Örsjön dia farihy ala be vato izay misy faritra tery telo. Ny manodidina dia misy ala mikitroka ary ny sisiny dia
Ny farihy misy karpa goavambe.Färgsjön dia ohatra tsara iray amin'ny fomba ahafahan'ny farihy ala kely iray ho tonga zokibe amin'ny jono fanatanjahan-tena. Amin'ny tranga Färgsjön
Farihy misy jono pikeperch manana laharana. Hjortesjön dia eo andrefan'ny Virserum, eo akaikin'i Virserumssjön izay mifandray aminy ihany koa. Ratsy otrikaina ny farihy
Linden dia farihy ala mikitroka tsy misy otrikaina misy rano madio sy nosy kely maromaro. Ny ala kesika, porcupine, manga ary heather dia manjaka manodidina ny farihy. Lalina ny farihy
Stora Åkebosjön dia manodidina ny 6 km andrefan'ny Hultsfred ary ho hitanao izany raha miala amin'ny lalana 34 mamaky an'i Hammarsebo mankany Stora Hammarsjön ianao. Ilay farihy
Hulingen dia miorina eo afovoan'ny tanànan'ny tanànan'i Hultsfred. Ny fomba tsotra indrindra hahitana ny farihy dia ny mitondra fiara mankany amin'ny tobin'i Hultsfred, izay misy tsato-kazo famantarana avy eo afovoany. Manakaiky ny lasy
Skärveteån sy Narrveten
Fanjonoana ala any anaty rano mikoriana. Halavan'ny farihy Halalinina ambany Halavany antonony Karazan-trondro Perch Pike Sutare Benlöja Lake
Ny renim-pianakaviana dia iray amin'ireo farihy efatra izay ampanofan'i Virserums SFK ary manofa jono. Ny hafa kosa dia Misterjö, Lysegöl ary Ånglegöl. Ny klioba mivarotra
Bysjön dia manodidina ny 15 km atsimo andrefan'ny Hultsfred. Bysjön dia iray amin'ireo farihy izay ao amin'ny Flatens Fiskevårdsområde ao amin'ny rafitry ny rano Gårdvedaån. Ho hitanao
Farihy tsara sy milamina i Stensjön, izay somary lavitra kely manodidina ny 10 km atsimo andrefan'ny Hultsfred. Ity dia ao amin'ny FVO an'i Stora Hammarsjön
Ilay farihy lehibe indrindra ao amin'ny faritry ny farihy Great Hammar - farihy tsara tarehy misy lanjany amin'ny jono fanatanjahan-tena ary manana tombony lehibe amin'ny fampandrosoana. Stora Hammarsjön dia tena farihy efitra ary kely
Hesjön dia iray amin'ireo farihy 20 eo ho eo izay ao amin'ny FVO an'i Stora Hammarsjön. Nampanofaina sy tantanan'i SFK Kroken ao Hultsfred ilay faritra. IN
Alegöl na Ålegöl, araka ny voalaza ao amin'ny sari-tany, dia rano avana tsara. Gölen dia eo amin'ny 5 km atsimon'ny Hultsfred no hita
Lilla Åkebosjön dia any avaratry Stora Åkebosjön ao amin'ny FVO an'i Stora Hammarsjön ary ny farihy dia mifandray amin'ny alàlan'ny renirano iray. Raha miankandrefana ianao avy
Välen dia eo afovoan'ny FVO an'i Stora Hammarsjön, manodidina ny 7 km atsimo andrefan'ny Hultsfred. SFK Kroken no mitantana ny farihy, izay mamoaka azy tsy tapaka
Farihy karpa manana toetra amam-panahy. NAOTY: Tsy afaka manjono ao anaty farihy fotsiny ianao amin'ny maha mpikambana anao ao amin'ny SFK Kroken. Stockebrogöl dia eo atsinanan'ny Stora Hammarsjön,
Miorina eo anelanelan'ny Målilla sy Virserum, eo akaikin'ny lalana 23. Ånglegöl dia iray amin'ny ohatra tsara amin'ny famoronana manintona
Lysegöl dia farihy miendrika boribory miorina amin'ny ala ala Småland. Gölen dia eo atsimon'ny Virserum eo akaikin'ny làlambe faha-23
Virserumssjön dia farihy lalina sy mahantra amin'ny otrikaina izay mifanila amin'ny fiarahamonina Virserum. Ny farihy sy ny ambanivohitra dia tsara tarehy ary be dia be ny manolotra mpizaha tany manodidina ny jono fanatanjahan-tena,
Emån - Klövdala mankany Ryningsnäs
Ny dingana faharoa an'ny Emån. Ity ampahany ity dia manomboka amin'ny Klövdala avy amin'i Järnforsen ka hatrany Ryningsnäs. Voahodidina ala sy kijana ny ony. Samihafa ny renirano
Järnsjön dia eo andrefan'ny Järnforsen no jerena ary nalain'i Emån izy. Ilay farihy dia ao anatin'ny FVO an'i Järnforsen. Izy io dia farihy kely marivo sy ny manodidina
Melsjön dia farihy marivo kely ary ny rano dia fanitarana an'i Gårdvedaån. Any avaratry ny Farihy Flaten andrefan'ny Målilla no misy azy ary
Flaten dia farihy jono fanatanjahan-tena malaza, tsy latsa-danja amin'ireo mpizahatany jono fanatanjahan-tena vahiny. Any amin'ny 15 km atsimo andrefan'ny Hultsfred no misy azy eo akaikin'ny lalana manelanelana an'i Målilla sy
Skiren dia farihy kely sy marivo izay ao amin'ny rafitry ny rano Flatens FVO sy Gårdvedaån. Flatens FVO dia ahitana ny farihy Garpen, Skiren, Övre Vrången,
Övre Vrången dia ao amin'ny Flatens Fiskevårdsområde. Any avaratra atsinanan'ny Virserum no misy ilay farihy. Izy io dia farihy ala misy zavamaniry tsy misy afa-tsy ny lalina ao anatiny
Gnötteln dia farihy rano tsy misy otrikaina. Satria ny farihy dia miorina amin'ny faritra iray amin'ny tanin'ny fambolena, ny farihy dia somary tsy mahazatra amin'ny faritra misy rano madio.
Emån, Nyboholm hatrany Klövdala
Ny halavan'ny ony dia manodidina ny 22 km. Ny renirano dia manomboka amin'ny faritanin'i Nässjö ary mikoriana mankany amin'ny ranomasina amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Oskarshamns- sy Mönsterås